Amnesty International oo ku baaqday in xayiraad la saaro Israa'iil - BBC News Somali
Amnesty International oo ku baaqday in xayiraad la saaro Israa'iil
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay xannibaad saarto dhamaan alaabta sida sharci darrada ah looga soo saaro degaanka ay Isra'iil ka dhistay dhulka Falastiniyiinta iyo in la soo gebagebeeyo faa'iidada laga helayo malaayiinka doolar ee horseedayo colaadda iyo tacaddiyada xuquuqda aadanaha ee ay Isra'il u geysanayso Falastiniyiinta.
Alaabo uu qiimahoodu gaaraya boqolaal milyan oo doolar ayaa laga soo saaraa deegannada Israa'iil ay ka samaysay dhulka Falastiniyiinta, taasi oo sanad walba dibedda loo dhoofiyo, ayadoo dalal badanna ay degamayntaasi ka soo horjeedaan.
Sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International, siyaasadda Israaii'l ee ay shacabkeeda ku dejinayso dhulka la haysta ee Falastiin ayaa horseeday in tiro badan oo dad ah loo geysto tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Kumanaan kun oo guryo iyo hanti ah oo ay leeyihiin dad Falastiniyiin ah ayay burburisay Isra'iil, halka boqolal kun oo qofna si xoog ah looga barakiciyay deegaanadooda.
Qoysas badan ayaa guryahooda laga eryay si fursad loo siyo degamayntaasi.
Amnesty waxay intaasi ku dartay in ku dhawaad boqol kun oo hektar oo dhul ah oo ay leeyihiin dad Falatsiniyiin ah ayaa si gaar ah loo calamadeeyay in deegamaynta loo isticmaalo.
Hay'addani ayaa sheegtay in Isra'iil ay sidoo kale si sharci darro ah ula wareegtay khayraadka dabiciiga ah ee Falastiin, gaar ahaan biyaha, dhul beeristu ku haboon iyo goobaha macdanta laga qodo, waxayna dalagyada halkaasi kasoo baxa u weecisay in ay ka faa;idaan warshadaha deegannadaasi ku yaala kadibna waxay u dhoofisaa dalalka dibedda.
Amnesty ayaa sidoo kale sheegtay in deegaannada Israa'iil ay ka dhistay daanta galbeed laga hirgaliyay kaabayaal dhaqaale oo ay ka mid yihiin waddooyin gaar ah oo kala qeybinaya magalooyinka iyo xaafadaha Falastiin, arrintaa oo xannibtay isu socodka dadka Falastiniiyiinta.
Israa’iil oo askarteeda uga digtay “basaasidda” Xamaas
Isra'iil ayaa sidoo kale tobankii sano ee la soo dhafay gacanta ku haysay hawada iyo isu socodka gaadidka bariga Gaza.
Tobanaankii sano ee lasoo dhafay, qararo kala duwan oo ay soo saartay Qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in deegamaynta Israa'iil ay kasoo horjeedo khawaaniinta caalamiga, in kastoo Israa'iil ay su'aal galisay go'aannadaasi.